nepal news in india2- Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live
सरकारले साझालाई दिएको ३ अर्ब ब्याज सहित असुल गर्ने
सरकारले साझा यातायात सहकारीलाई विद्युतीय सवारी साधन (बस) खरिदका लागि दिइएको ३ अर्ब रुपैया ब्याजसहित फिर्ता लिने भएको छ । सहकारीले विद्युतीय बस ल्याउन नसकेको पाइएपछि साँवा मात्रै नभई ब्याज रकम समेत फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को यही माघ ६ गते बसेको बैठकले उक्त सहकारीलाई दिइएको रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको विहिवारको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ र २९ गते को निर्णयअनुसार साझा यातायात सहकारीलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसहित सरकारका तर्फबाट शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सो संस्थाले निर्धारित समयभित्र ती बस सञ्चालन गर्न नसकेको र आवश्यक प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको पाइएकाले लगानी फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यस्तै गत पुस ९ को निर्णय अनुसारवातावरणमैत्री विद्युतीय बसको प्राविधिक विवरण र लागत अनुमान एवं विद्युतीय बस आपूर्तिका लागि शर्त तयार पारी नयाँ खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । सरकारको तर्फबाट उक्त खरीदकालागि ३ अर्ब अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने गरि निर्णय गरिएको हो ।
मन्त्रीपरिषदका अन्य निर्णयहरुः
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट डडेल्धुरालाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै सदस्यहरुमा प्रचण्डराज प्रधान, गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल हुनुहुन्छ ।
निकट भविष्यमा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्गका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । रेल सेवाका लागि दक्ष जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेको खण्डमा मात्रै श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम २६ जनासम्म विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न उक्त कम्पनीलाई स्वीकृति दिइएको हो ।
यस्तै,सरकारले सोही कम्पनीका लागि विभिन्न ४५ पदमा २ सय २६ दरबन्दीमा औचित्य र आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको माध्यमबाट कर्मचारी भर्ना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । कर्मचारी भने करारमा भर्ना गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निकट भविष्यमा नै सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ ।
निगमका संचालक सदस्य खरेलको राजीनामा स्वीकृत
नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष एवंं सञ्चालक सदस्य मदन खरेलले यही माघ १२ गतेदेखि लागू हुने गरी दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । रिक्त हुन आएको पदमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सचिवलाई तोक्ने निर्णय भएको छ ।
शाहले नड्डालाइ सुम्पिए बीजेपी अध्यक्षको जिम्मेवारी, कमललाई सम्पूर्ण भारतमा पुरयाउने अध्यक्षको उदघोष
भाजपा अध्यक्षमा नड्डा चयन
भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अध्यक्षमा नेता डा . जगत प्रकाश नड्डालाइ चुनिएको छ । पार्टीले सोमबार नाडालाई पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो । नड्डा सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा भाजपाको ११औँ अध्यक्ष बनेका छन् ।
विगत छ महिनादेखि कार्यबाहक अध्यक्षको रूपमा कार्य गरिरहेका नड्डालाइ पार्टीले पूर्ण रुपमा अध्यक्षको जिम्मेबारी दिएको हो । तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह गृहमन्त्री भएपछि उनले राजीनामा दिएर नड्डालाई गत जुनमा कार्यबाहक अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नवनिर्वाचित पार्टी अध्यक्ष नड्डालाइ बधाइ दिदै उनको नेतृत्वमा पार्टी बिस्तारको कार्य हुने तथा अध्यक्षको रुपमा यशस्वी हुने आशा व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पार्टी कार्यालय पुगेका नड्डालाई गृहमन्त्री तथा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष अमित शाहले फरक तरीकाले स्वागत गरेका थिए । उनले नड्डालाइ शुरुमा पदभार सुम्पिए र त्यसपछि मिठाइ ख्वाएका थिए । नड्डालाइ बसाउनकालागि शाहले आफैले कुर्सी तानेका थिए । शुरुमा शिष्टाचारका कारण नड्डा बस्न राजी भएका थिएनन तर शाहको आग्रहलाइ उनले टाल्न सकेनन् ।
अध्यक्षको पदभार संभाले लगत्तै नड्डाले कार्यकर्ताहरुको साथ लिएर पार्टीलाइ उत्कर्षमा पुरयाउन आफ्नो सम्पूर्ण ताकत र सामथ्र्य लगाउने बताएका छन् । उनले आधिकारिक ट्वििटरमा आफ्तो प्रतिवद्धता साझा गदै सबैसँग मिलेर सम्पूर्ण भारतमा कमलको फूल पुरयाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मैं अपनी सम्पूर्ण ताकत एवं सामर्थ्य के साथ तथा सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में पहुँचाने का कार्य करूंगा।
मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ की हम सभी मिलकर सम्पूर्ण भारत में कमल का फूल पहुचायेंगे।
पूर्व केन्द्रिय मन्त्री जेपी नड्डा अमित शाहको ठाउँमा अध्यक्ष बनाइएका हुन् । बीजेपीका वरिष्ठ नेताहरु अमित शाह,राजनाथ सिंह,नितिन गडकरी लगायत अन्य मुख्यमन्त्री तथा नेताहरुले सोमबारको नामांकन प्रकृयामा नड्डाको नामको प्रस्ताव गरेका थिए । पार्टीले निर्वाचनको घोषणा गरयो ।
गृहमन्त्री शाह पछिल्लो साढे पाँच वर्षदेखि बीजेपी अध्यक्षको जिम्मेबारीमा थिए । पार्टीको द्रुत बिस्तार,संगठनको संरचनागत सुधार तथा २०१९को लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाको बहुमतको जीतको श्रेय उनको नाम लेखिएको छ । भाजपाले आफ्नो दलमा सन् २०१९ सम्ममा १८ करोडभन्दा बढी सदस्यहरू रहेको दावी गरेको छ ।
जेपी नड्डाको राजनीतिक करिअर
नड्डाले १९९३देखि २००२ सम्म हिमांचल प्रदेश विधानसभाको सदस्य,१९९८ देखि २००३ सम्म हिमाँंचल सरकारमा केबिनेट मन्त्री , २००८ देखि २०१० सम्म हिमांचलमा प्रेमकुमार धुमल सरकारमा मन्त्री तथा अन्य मन्त्रालय संभालेका थिए । अप्रिल २०१२मा राज्यसभा साँसद चुनिएका नड्डाले २०१४देखि २०१९ सम्म मोदी सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा कार्य गरेका थिए । नड्डा अमित शाह गृहमन्त्री बनेपछि जुन २०१९मा भाजपाका कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएका थिए ।
नड्डाका अघिल्तिर निर्वाचन चुनौती सबैभन्दा प्रमुख रहेको छ। नजीकिदै गरेको दिल्ली विधानसभा तथा बिहार विधानसभाको निर्वाचनको दबाबका समयमा नड्डा अध्यक्ष बनेका छन् । यसका अलाबा बीजेपीको हाथबाट कयौं राज्यको सत्ता फुत्किसकेको छ भने उत्तर प्रदेशको चुनाव पनि आउन लागेको छ ।
सभामुखको उम्मेदवार टुगिंएसँगै राजीनामा दिएँ: तुम्वाहाङ्फे
उपसभामुख डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले सभामुखको उम्मेदवारको टुङ्गो लागेसँगै आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमार्फत उपसभामुखबाट राजीनामा घोषणा गरेलगत्तै संसद्भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले संविधानले संसद्लाई नेतृत्वविहीन हुने कल्पना नगरेकाले सभामुखको उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्नेबित्तिकै आफूले राजीनामा गरेको बताइन् । आइतबार नेकपाको सचिवालय बैठकले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
उनले आफू दलको नभई संसद्को उपसभामुख भएकाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले राजीनामा गर्न दिएको निर्देशन मान्न नसकेको प्रस्टीकरण दिइन । ‘संसदीय मर्यादालाई ख्याल गरी मैले मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा गरेको हुँ’, तुम्वाहाङ्फेले भनिन ।उपसभामुखबाट राजीनामा गरेसँगै ट्रयाक परिवर्तन भएको उनको भनाइ थियो । उनले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा संविधान र कानूनबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गरेको जिकिर गरिन ।
असोज १४ गतेपछि सभामुख पद रिक्त रहेको असहज परिस्थितिमा संविधानले दिएको अधिकार अनुसार आफूले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरेको उनले स्पष्ट पारिन । ‘उपभामुखबाट राजीनामा गर्दा म अत्यन्त खुशी छु, राजीनामासँगै मेरो प्रगतिका लागि थप उत्साह मिलेको छ’, उनले भनिन ।
संसद् सचिवालयको कर्मचारीले दुव्र्यवहारको आरोप लगाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा गरेका थिए । गत असोज दोस्रो सातादेखि प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन छ । ––रासस
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निणर्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बेलुका बसेको (नेकपा) सचिवालयको बैठकले सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागी राजीनामा दिएपछि विगत चार महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त रहँदै आएको छ । सभामुख नहुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित हुँदै आएको छ । नेकपाको यो निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाले नयाँ सभामुख पाउने भएको छ ।
आइतबार बिहान पार्टी अध्यक्षयद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको सहमतिका आधारमा सचिवालय बैठकले सापकोटालाई सभामुखमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन सभामुख महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र लामो छलफल भएको थियो ।
यही पुस ४ गतेदेखि शुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भइरहेको थियो । महासचिव पौडेलले बैठकपछि सचिवालयले एक मतका साथ सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले भने, “उपसभामुखका सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडिको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुहुने हाम्रो अपेक्षा छ ।”
अग्नि सापकोटा को हुन??
विसं २०१५ फागुन १४ गते सिन्धुपाल्चोकको कुभिण्डेमा जन्मिएका सापकोटाले १५ वर्ष अध्यापन गरेक थिए। नेता सापकोटा विसं २०३५ मा नेकपा (चौथो महाधिवेशन) बाट पार्टी राजनीतिमा लागेका हुन् ।
हाल नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका सापकोटा २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका थिए । विसं २०६८ मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका सापकोटा २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि सिन्धुपाल्चोक–२ बाट दोस्रोपटक संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थियो ।
सापकोटाले २०७३ मा नेपाल सरकारको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्भालेका थिए। विसं २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सापकोटा २०४८ सालदेखि सक्रियरूपमा राजनीतिमा क्रियाशील छन् ।
विसं २०५१ मा तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र) को केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०५१ असोजमा नेकपा (माओवादी) केन्द्रीय सदस्य भएका उनले विसं २०५२ माघदेखि भूमिगत राजनीतिसमेत गरेका थिए।
नेपाल भारत पारवहान सन्धि नविकरण, नेपालले चीनको सात बन्दरग्राह प्रयोग गर्न पाउने
नेपाल भारतबीच भएको पारवहन सन्धि नविकरण हुने भएको छ। पारवहन सन्धिमा नयाँ कुरा थप गर्दै दुई देशबीच भएको पारवहन सन्धि नविकरण हुन लागेको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ आर्यालले जानकारी दिएका छन्।
नेपाल भारतबीच पारवहान सम्बन्धि नयाँ सन्धि भएपछि नेपालले भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरेर आयात–निर्यात गर्न सक्ने सचिव आर्यालले बताएका छन्।
यस्तै नेपाल र चीनबीच २०७३ मा भएको पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए। जस अनुसार नेपालले चीनको सात बन्दरग्राह प्रयोग गर्न पाउने भएको हो।
चीनको चार सामुन्द्रिक र तीन सुख्खा बन्दरग्राह गरि नेपालका लागि सात बन्दरग्राहको बाटो खुला भएको छ। नोपल र चीनबीच भएको पारवहान सन्धि कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले भारतका अतिरिक्त चिनियाँ बाटो हुँदै पनि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटो खुलेको हो।
वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार चीनको लियन्युंगा, सेन्जेन, तियान्जिन र झ्याङजियाङ गरी चार सामुद्रिक बन्दरगाह तथा लन्जाओ, ल्हासा र सिगात्से गरी तीन सुख्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न सक्नेछ।
उनले भने, ‘नेपालले भारतबाट मात्रै गर्दै आएको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार अब चीनबाट गर्ने बाटो खुलेको छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढोत्तरी हुने विश्वास लिएका छौँ।’
यस्तै रसुवा र तातोपानी नाकासहितका ६ नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पनि बाटो खुलेको छ । हुम्लाको यारी सुंखवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको नेचुङ ९कोरला० र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला गरी ६ वटा नाकाबाट नेपालले चीनसंग ब्यापार गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधन अनुमति लिएर सिगात्सेसम्म जानसक्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पार्टी एकताकालागि सहमतिमा अघि बढन तयार छु : सभापति देउवा
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकता कायम राख्न र पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि सहमतिको आधारमा अघि बढन आफू तयार रहेको बताएका छन् । आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा विहिबार काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुलाइ खाना खानेगरि बोलाएका देउवाले पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षसँग तत्काल संवाद थाल्ने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताएको छलफलमा सहभागी काभ्रेपलाञ्चोकका सभापति मधु आचार्यले जानकारी दिए ।
रामचन्द्र पौडेल समुहले बोलाएको जिल्ला सभापति बैठक समापन पछि विहिबार देउवाले बोलाएको दिवा खाना छलफलमा सहभागी भएका जिल्ला सभापतिहरुसँग गुनासो सहितको हर्षित मुद्रामा देउवा प्रस्तुत भएका थिए । झोंक्कि स्वभावका देउवा यो छलफल बैठकमा नरम रुपमा प्रस्तुत भएको सहभागीहरुले बताएका छन् । तीन दिने बैठकमा आफूलाइ नबोलाएको गुनासो उनले गरेका थिए ।
जिल्ला सभापतिहरुले सोमबारदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौँमा चलेको ‘जिल्ला सभापतिको परामर्श बैठक’का निष्कर्ष देउवालाइ सुनाएका थिए । जिल्ला सभापतिहरुले सरकारका अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध सिङ्गो पार्टी एक भई सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी बहुमत र अल्पमतका आधारमा चल्न नहुने भन्दै सहमतिको वातावरण कायम गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए ।
देउवाले सहमतिका आधारमा पार्टीको निर्णय गर्न आफूले लगातारको प्रयास गर्दा पनि संभव नभएपछि बहुमतिय प्रकृया अपनाएर निर्णय गरेको जिल्ला सभापतिहरुलाइ सुनाएका थिए । तर आफू अझै पनि कमी कमजोरीलाइ सुधारेर अघि बढन तयार रहेको छलफलमा सहभागी सभापतिहरुले बताएका छन् ।
काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पुस ११ गते पार्टीको १४औँ महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने र केन्द्रीय समितिको समयावधि एक वर्ष थप गर्ने लगायत महत्वपूर्ण निर्णय बहुमतका आधारमा गरेको थियो । सो बैठकले महाधिवेशनको प्रयोजनार्थ विधानका केही दफा निलम्बन गर्ने, विधानमा उल्लेख २८ केन्द्रीय विभागको संख्या ४७ पु¥याउने, तरुण दलको म्याद छ महिना थप गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको थियो ।
संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा गरेको निर्णय र विधानविपरीत विधानका केही दफा निलम्बन गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले भावी योजना तय गर्नका लागि सुझाव लिन जिल्ला सभापतिहरुको बैठक बोलाएको थियो । सो बैठकमा चार दर्जन बढी जिल्ला सभापतिको सहभागिता र समर्थन रहेको थियो ।